Sonwabe kakhulu ukuqala uthotho lwethu olutsha lweViral Off Collection. Ngeli xesha ingakumbi ukuzikhusela ngokukhuselekileyo kubaluleke ngakumbi. Ukuqokelelwa kwentsholongwane kusetyenziselwa ubuchwephesha beViralOff® yobuchwephesha enokuthi ibonelele ngesiqwengana kunye nentuthuzelo yokhuseleko lomntu. Intsholongwane Off imaski kunye sweatshirt ar ...
Ixesha leMiboniso kwi-Intanethi liza-iZambatho zokuThengisa iParis / ukuThengisa ubuGcisa kwi-Intanethi
Intsholongwane ye-corona itshintsha uninzi lwemiboniso kwinkonzo ye-Intanethi. Into esiyithathayo ngoku ngoSeptemba 2020 zezi zilandelayo: I-Apparel Sourcing Paris (ngo-Septemba 1,2020-Februwari 28, 2020) kunye ne-SOURCING kwi-MAGIC Online (ngo-Septemba 15-Disemba 15, 2020) ..
I-TEXWORLD IFANELE UKUTSHINTSHWA KWENKQUBO YASEKHAYA E-USA-Julayi 2020
ngomphathi ku 20-07-24
Ukufumana iSourcing kwisiXeko saseNew York (esasifudula sisaziwa njenge-Apparel Sourcing USA), umsitho wamazwe aphesheya wehlobo wenziwa ngoJulayi 21-23, 2020 kulo nyaka. Umnyhadala okwi-intanethi usebenza njengelinye iqonga labenzi behlabathi ukunxibelelana ngokuqhubekayo nokunxibelelana nomthengi wase-US ...
I-ZNS UKUQOKELELWA KWEXESHA LEXESHA SS21 IYEZA!
ngomphathi ku 20-06-16
Nayiphi na imibuzo, pls uzive ukhululekile ukuqhagamshelana nathi.
Siphinda siSebenze emva kwe-COVID-19, igcwele ubuVithamini!
ngomphathi ku 20-02-18
Siqala ukusebenza emva kwe-COVID-19, igcwele amandla! Siza kuqhubeka ukubonelela abathengi ngeyona mveliso ibalaseleyo kunye nenkonzo ebalaseleyo! Ndiyathemba ukuba umhlaba wonke uzakuba sempilweni kungekudala.
Isambatho Sourcing eParis ekwindla ka-2019